Izivumelwano Zokugcina Amabhizinisi E-UAE | Amal Khamis Abameli Nabaluleki Bezomthetho
Izivumelwano Zokugcina Amabhizinisi E-UAE
Izinsizakalo Zokugcina Izinkampani E-UAE
izivumelwano zokugcina amabhizinisi
Isivumelwano sokugcinwa kwemali sihlukile emkhakheni webhizinisi ngoba ukhokhelwa kusengaphambili ngomsebenzi osazowuletha. Lokhu kwehlukile kulokho okutholakala ngokuthengiselana kwebhizinisi, lapho kufanele uhambise khona ngaphambi kokuthi ukhokhelwe.
Isivumelwano sabazuzi sinenzuzo enkulu, ikakhulukazi kwabasebenza ngokuzimela impilo yabo yokuphila ejwayele ukuhlala ne-pendulum swinging phakathi "kwedili noma indlala". Kukhona umsebenzi omningi ngesikhathi noma ukushoda kwawo. Ukuba nesivumelwano sokugcina namakhasimende kusiza ukuhlinzeka umuntu osebenza ngokuzimela ngokuqina kwemali engenayo ngenkathi kunikeza nethuba elanele lokwakha iphothifoliyo yakhe.
Ngokwengeziwe, ukuba nesivumelwano sokugcina imali noma ngaphezulu kuphothifoliyo yakho kunikeza isimo 'sobungcweti'. Lokhu kungenxa yokuthi isivumelwano sokugcina senza amaklayenti angaba khona ukuthi akubone njengochwepheshe futhi abe nenani elikhulu lokuwanikeza wona. “Ngiqonde ukuthi, (yena) wayengeke abe nesivumelwano sokugcina nomuntu ukube wayengazi ukuthi ukhuluma ngani”, kusho lowo ongaba yikhasimende.
Nakuba isivumelwano sokugcina siyinto efiselekayo kumuntu ozimele, phawula ukuthi asisebenzi kuma-freelancers kuphela kodwa cishe kunoma yimuphi umuntu webhizinisi ofuna ukusimamisa ukugeleza kwemali engenayo. Lokhu uthe kubalulekile ukuqonda ukuthi siyini isivumelwano sokugcina imali nokuthi ungasisebenzisa kanjani sibe nomthelela omkhulu ebhizinisini lakho. Kwa-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, sinikezela ngezinsizakalo Zokugcina Ezinkampanini namabhizinisi ase-UAE.
Siyini isivumelwano sokugcina imali?
Isivumelwano sokugcina imali siyinkontileka phakathi kwabasebenza ngokuzimela namakhasimende abo egcina izinsizakalo zabasebenza isikhathi esengeziwe futhi enikeza i-freelancer uhlelo lokukhokha oluzinzile. Isivumelwano sokugcinwa kwemali sihlukile kwezinye izinhlobo zezinkontileka noma amamodeli entengo ngoba iklayenti likhokhela izinsizakalo zakho kusengaphambili. Kwesinye isikhathi, uhlobo ngqo lwensizakalo alucaciswanga ngokucacile. Kodwa-ke, izinsizakalo zimbozwe kububanzi besifanekiso somsebenzi osinikeze bona.
Ngaphandle kohlobo lwensizakalo okulindeleke ukuthi uyenze, isivumelwano somgcini sibuye sichaze izibopho ezahlukahlukene kuzinhlangothi zombili nokulindelwe kuzo zombili izinhlangothi. Lokhu kungafaka imigomo yokusebenza, imali ekhokhwa ngabalondolozi, izindlela zokuxhumana, neminye imithetho yezobuchwepheshe.
Kungani isivumelwano somgcinisihlalo silungele ibhizinisi lakho?
Amabhizinisi, ikakhulukazi lawo asembonini yezinsizakalo, aseqala ukuthembela kakhulu ezivumelwaneni zokugcina imali. Inezinzuzo eziningi umuntu webhizinisi le-savvy angakwazi ukuzishalazela. Lezi zinzuzo azisebenzi kumhlinzeki wesevisi kuphela kodwa kubo bobabili abahlinzeka ngezinsizakalo kanye namakhasimende abo. Ezinye zazo yilezi:
Uhlelo lwesivumelwano sokugcina luqinisekisa ukuthi umhlinzeki wesevisi, osebenza ngokuzimela, kulokhu, uzokhokhelwa ngokuqhubekayo. Ngokwethenjelwa kwemali engenayo ekupheleni kwenyanga, umhlinzeki wesevisi angagxila ngokuphelele ezidingweni nasezindabeni zamakhasimende abo bese eletha umsebenzi wekhwalithi ye-premium. Lokhu akwenzeki nje ngoba i-freelancer iqinisekiswa ngokuthola imali ekupheleni kwenyanga kepha futhi ngoba kunokuba ichithe isikhathi ifuna amakhasimende amasha akhokhelayo, i-freelancer inganikela ngaleso sikhathi kwiklayenti eligciniwe.
Amaklayenti nawo ayazuza kulungiselelo lokuthi aqinisekisiwe ngokutholakala komhlinzeki wawo wesevisi. Futhi, izivumelwano zabalondolozi zinendlela yokwenza ngcono izinqubo zomsebenzi, ngaleyo ndlela ziholele inzuzo engcono kumakhasimende futhi, ekugcineni, nomhlinzeki wesevisi. Ubudlelwano be-freelancer namakhasimende esivumelwaneni sokugcina bujwayele ukuba bujule futhi bunelise kunamakhasimende ajwayelekile. Lokhu kungenxa yesikhathi esandisiwe zombili izinhlangothi okufanele zisebenze ngazo kanye nethuba lelo sikhathi elinikeza iqembu ngalinye ukucubungula ubuncane bobudlelwano.
Ukwethembeka kwesivumelwano sokugcina kwenza i-freelancer ikwazi ukubikezela ngokunembile ukuhamba kwemali isikhathi ngasinye, ngaleyo ndlela inikeze ukucaca okungcono futhi, njalo, isakhiwo esingcono sebhizinisi. Ngokuhamba kwemali okungaguquguquki, ama-freelancers akwazi kangcono ukusingatha izindleko ezihehwa yibhizinisi labo.
Izingxenye ezingekho-ezinhle kakhulu zezivumelwano zokugcina
Njengokungakholeki njengoba izivumelwano zokulondolozwa zizwakala ngombono weklayenti nombono we-freelancer, akunazinkinga. Yize abanye bengase baphikise ngokuthi izinzuzo zayo zidlula kakhulu amaphutha abo, kubalulekile ukwazi wonke amaqiniso ngaphambi kokukhetha isivumelwano sokugcina. Ezinye zezingqinamba yilezi:
● Ukuzivalela ngaphakathi
Kwabaningi abazimele, ukukhetha ukuba ngabasebenza ngokuzimela kwenziwa ngoba befuna ukuphatha ukuthi basebenzisa kanjani isikhathi sabo - kufaka phakathi ukuthi bazosebenza nobani ngasikhathi sini nokuthi msebenzi muni okufanele bawenze.
Ngesivumelwano sokugcina, enye yale "nkululeko" iyasuswa ngoba uzibophezela kwiklayenti lakho ngenani elithile lamahora. Lawo mahora awasengowakho, futhi noma ngabe ngabe wenzani ngalesi sikhathi bekungeke kusenzeka.
● Ukulahla imali
Ngokombono weklayenti, uzibeka engcupheni “yokusebenzisa imali ongadingi ukuyisebenzisa”. Lokhu kungenxa yokuthi kungahle kube nezikhathi lapho ungazidingi izinsizakalo zomxhumanisi wakho noma i-freelancer, kepha ngenxa yesivumelwano sokugcina phakathi kwezinhlangothi zombili, nakanjani uzomkhokhela lowo muntu.
Ngalesi sizathu, zombili izinhlangothi kufanele zichaze izibopho zazo nokulindelwe lapho kubhalwa isivumelwano sokugcina bese zisibuyekeza kahle ukuqinisekisa ukuthi zikhululekile ngenkontileka. Lapho nje usayine olayini abanamachashazi, uboshiwe ngokomthetho, futhi ukuphambuka kuzimfuneko zesivumelwano kungakwenza ube nesibopho sokumangalelwa.
Izinhlobo zezivumelwano zokugcina
Ngenkathi cishe noma yiliphi ibhizinisi lingazuza ezivumelwaneni zababambisi, umqondo wababambi ikakhulukazi wamukelwa amafemu abonisanayo, abasebenza ngokuzimela kanye nezinsizakalo zomthetho. Lokhu kusho, kunezinhlobo ezimbili ezibalulekile zezivumelwano zokugcina imali amabhizinisi ashiwo ngenhla angazuza kuzo.
Izivumelwano zomgcini-mali zokukhokhela umsebenzi owenziwe
Izivumelwano zomgcini wokukhokhela ukufinyelela kumhlinzeki wesevisi noma umxhumanisi
Izivumelwano zomgcini mali ezikhokhela umsebenzi owenziwe
Ngalolu hlobo lwesivumelwano sokugcina, umhlinzeki wesevisi noma umxhumanisi uyakhokhelwa ngomsebenzi wabo wenyanga. Akuhlukile kangako emsebenzini wabasebenza ngokuzimela, ngaphandle kokuthi njengomhlinzeki wesevisi ekugcinweni kwesitoreji, uyaqinisekiswa ngomsebenzi othile ovela kuwe kulelo klayenti futhi njalo, nomholo othile.
Le nketho ingaba ngcono kakhulu kumuntu osebenza ngokuzimela engena nje enkundleni yezivumelwano zokugcina namakhasimende. Vele, lokhu futhi kuxhomeke ohlotsheni lwenkonzo i-freelancer engayinikeza.
Izivumelwano zomgcini-mali ezikhokhela ukufinyelela
Le nketho ingeyokuqala futhi imvamisa itholakala kuphela kubahlinzeki besevisi abathole isimo sokuhahela 'sobuchwepheshe' noma 'igunya emkhakheni abawukhethile. Kule modeli, umxhumanisi akadingi ukubala umsebenzi owenziwe ukuze akhokhelwe. Esikhundleni salokho, iqiniso lokuthi ayatholakala kwiklayenti lanele ukubakhokhela, noma ngabe bengazisebenzisi izinsizakalo zabo ngaphezu kokukodwa noma kabili ngenyanga.
The imodeli yokukhokhela ukufinyelela kukhulisa ngokumangazayo inani lomhlinzeki wesevisi ngoba kukhombisa ukuthi iklayenti libona umsebenzi wakho uhlukile ngokwanele ukugcina uqhubeka ukhokha ukuze ufinyelele kuwo kunokuba uthi ukuvalelisa kuwe.
Izivumelwano zokugcina imali ku-UAE
Izinhlelo zokugcina ziwukhiye wempumelelo yesikhathi eside nokusimama kwanoma yiliphi ibhizinisi. Izivumelwano zokugcina izinkontileka ezichaza ngokusemthethweni uhlobo lobudlelwano bakho nommeli wakho. Lena indlela ephephe kakhulu nengabizi kakhulu yokufinyelela izinsiza zomthetho nokuhlelela ikusasa.
Emahhovisi e Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, sikunikeza ngezinsizakalo ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukukuhlelela izivumelwano zokugcina kwakho. Ngoba izwe lebhizinisi lihlala ligobhoza njalo ngenxa yokuqhamuka okusha okuvela nsuku zonke, kubalulekile ukuthi kube nezivumelwano zokugcina okukhombisa ukuguquguquka kwezikhathi. Uzothola konke lokho nokuningi lapho usiqasha ukuba sibe ngummeli wakho. Finyelela kithi namuhla, futhi ake siqale.